IJavanese, ikati elithandeka kakhulu | Amakati kaNoti
Isithombe - Catbreedselector.com
Ikati laseJavane yisilwane esingakholeki esiguquguquka kalula siphile efulethini nokuthi uzodinga kuphela ukutotosa okuningi, ngaphezu kokudla okwanele, ukuze ujabule nomndeni.
Uma ungomunye walabo abafuna ukuba nomngane onomusa othandekayo futhi onothando futhi onezinwele ezinde nezithambile, iJavanese yikati efanelekile oyifunayo.
1 Umsuka nomlando weJavanese
3 Kunjani ukuziphatha kwabo?
4 Ungayinakekela kanjani ikati laseJava?
5 Kubiza malini ikati laseJava?
Umsuka nomlando weJavanese
Isithombe - Javanescat.com
Noma kungahle kube okuphambene, Lolu hlobo aluveli esiqhingini saseJava njengoba igama lalo lingakhombisa, kepha kunalokho kusuka kubafuyi baseNgilandi abawela amakati e-Eastern Shorthair neBalinese cishe ngawo-1960. Ngaphezu kweJavanese, igama elenziwe ngomunye wabantu bokuqala abakhetha amazinyane amahle kakhulu, yaziwa nangokuthi iMandarin noma i-Oriental Longhair.
Kuyikati elilinganiselwe, eline- isisindo esiphakathi kuka-4 no-6 kilos. Umzimba ulinganiswe kahle, unemisipha, mncane, unezinwele ezinde, ezikahle nezisilika eziwuvikelayo. Lokhu kungaba umbala owodwa, ufudu, itabby, itabby yesiliva, iveni, i-harlequin, intuthu, i-bicolor.
Ikhanda lakhe limise okonxantathu, ngomlomo olenzelwe kancane nezindlebe zithambekele ezinhlangothini. Amehlo asezingeni eliphakathi nendawo, i-alimondi ngombala. Imilenze yayo iqinile, futhi umsila mude kakhulu futhi mncane.
Ine- isikhathi sokuphila seminyaka eyi-14-18.
Kunjani ukuziphatha kwabo?
Isithombe - Linkbeef.com
Kumane kuyikati uthando 🙂. Ngothando kakhulu, ihlala icela ukunakekelwa ngabantu bayo. Ngaphezu kwalokho, iyi- okhulumisana omkhulu, kangangokuba kulula ukuthi wazi ukuthi ufunani futhi / noma uzizwa kanjani ngokumlalela nje. Kubuye futhi uhlakaniphile kakhulu, Kubani ungafundiswa amaqhinga ahlukahlukene ngendlela elula.
Kungazwana kahle nabantu abadala kanye nezingane, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi zombili zihloniphe isilwane futhi zingadonsi umsila wazo noma izindlebe, nokuthi zidlale ngendlela enenhlonipho ngaso.
Ungayinakekela kanjani ikati laseJava?
Ezitolo zezilwane uzothola izinhlobo eziningana zokudla kwekati: ukudla okomile, ukudla okumanzi, futhi kungahle kube nokunye okwemvelo okufana neSumum noma iYum Diet. Bonke, inqobo nje uma bengenakho okusanhlamvu, kuzoba ukukhetha okuhle kwikati lakho laseJavanese. Ungakhetha nokumupha ukudla okuzenzela (noma uBarf), uma ungaxhumana nesazi sokudla okunomsoco okuqondayo ukondliwa ngofele.
Kungani kungafanele ukuthi ikati laseJavane londliwe okusanhlamvu? Ngesizathu esisodwa esilula: kungadala ukungezwani komzimba. Amakati adla inyama, futhi awanawo ama-enzyme adingekayo ukuze akwazi ukufaka kahle irayisi, ummbila, ... ngamafuphi, lezi zinhlobo zezithako. Futhi, uma benikezwa ukudla -ngenamabele, ijazi labo lizokhanya, nempilo yabo iyoba muhle.
Ake siqale sikhulume ngeyakho izinwele. Yinde le, ngakho-ke kufanele uyihlikihle nsuku zonke. Ngale njongo ungasebenzisa ibhulashi noma ikhadi, noma ngabe sincoma i-FURminator (noma efanayo) ngoba ukuba nezinsimbi eziqinile futhi ndawonye, ​​kususa izinwele ezifile kakhulu.
Mayelana ne- amehloUma ubona ukuthi unezimfihlo ezifana nama-legañas, zisuse ngobumnene nge-gauze emanzi (ngamanzi). Sebenzisa i-gauze ngeso ngalinye, ngoba uma oyedwa kulaba ababili ethelelekile, ungakudlulisela ukutheleleka kokuphilile.
Ekugcineni, i izindlebe Kumele zibuyekezwe ngezikhathi ezithile. Uma ubona ukuthi zingcolile futhi zinuka kabi, thinta udokotela wezilwane wakho njengoba engaba ne-otitis noma enye inkinga.
Isithombe - Petspyjamas.com
Ayinazo izifo ezikhathazayo, ngaphandle kwalezo ezinye izinhlanga ezingaba nazo, njenge-leukemia, imikhuhlane, phakathi kwabanye. Kepha okufanele uhlale ukukhumbula ukuthi, ngenxa yobude bezinwele zakho, kufanele uzihlikihle nsuku zonke ukunciphisa ubungozi bazo. izinwele zamabhola. Uma lokhu kwenzeka, ungahle ugaxe noma uhlanze, futhi ube nobunzima bokuzikhulula.
Vele, uma ngokungazelelwe ubona ukuthi uphansi, noma ukhombisa ukungaphatheki kahle, kufanele uxhumane nodokotela wezilwane ngokushesha okukhulu, ikakhulukazi uma ubona ukuthi udla kancane, unenkinga yokuqeda, futhi / noma ukhononda ngobuhlungu.
Kubiza malini ikati laseJava?
Uma uzimisele ngokuphelele ukuthola ikati lohlobo lweJavanese, futhi ufuna ukwazi ukuthi lingakubiza malini, noma kancane, kufanele wazi ukuthi inani lisondele I-800 euro. Vele, kubalulekile ukuthi umdlwane unezinyanga okungenani ezimbili ubudala, nokuthi usudla ukudla okuqinile.
Kunoma ikuphi, uma ungamlinda ukuba aphenduke izinyanga ezintathu abe ngcono, ngoba lokhu kuzonciphisa ubungozi bokuba nezinkinga ngenxa yokungazethembi esikhathini esiphakathi. Kepha yebo, kusukela ngesikhathi enamasonto ayisishiyagalombili ubudala kuze kube yilapho ekugcineni umyisa ekhaya, kufanele umvakashele ukuze azokwazi futhi athole ukuzethemba.
AmaJavanese anoboya obumangalisayo, awucabangi? Lapha sikushiya nezithombe eziningi ezibonisa ukuthi yinhle kangakanani:
Isithombe - Pawesomecats.com
Isithombe - Vetstreet.com
Isithombe - Cattime.com
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » IJavanese, ikati elithandeka kakhulu